Posted by JuneOne at 11:36 PM
ပျော်ရွှင်ကြည်နှူး ဝမ်းသာ ရွှင်မြူး ခဲ့ရတယ်..။ကိုယ့်ကို အလေးထားသူတွေက
ကျနော်မသိအောင် တိတ်တိတ်လေး စီစဉ်ပေးခဲ့တာမို့...။)
khin oo may October 16, 2010 at 1:55 AM
TZA October 16, 2010 at 8:57 AM
June One.. မွေးနေ့မှာ ဟက်ပီးဟက်ပီးဟက်ပီး ဖြစ်နေပါစေ။
:P October 16, 2010 at 9:58 AM
30 ကျော်လို့ 40 ထဲရောက်ပဟဲ့လို့ ခုန်မကူးလိုက်ပါနဲ့... အလယ်လောက်ကလူတွေ ကျောချမ်းလိုကတာ.. ကြား9နှစ်ကို ထည့်တွက်ပါဦး...။
ZT October 16, 2010 at 10:23 AM
၃၀ ကျော်လည်း ကိစ္စ မရှိပါဘူး။ ရာထူးက နှစ်ဆင့်တောင် တက်ပြီးပြီပဲ။ :D
Rita October 16, 2010 at 4:43 PM
၃၀ ကျော်ရုံလေး မဟုတ်လား။ ဘာလို့ ၄၀ထဲ ချက်ချင်းရောက်သွားတာဒုန်း။
nu-san October 16, 2010 at 10:15 PM
စားချင်လိုက်တာ.. ဟင်းတွေကြည့်ရတာ ကောင်းမယ့်ပုံပဲ.. ရဘူး..ရဘူး.. ဘဲကင်ပုံပြန်တင်ပေးပါ.. :D
Dian Xiao Er, is it? I like the roasted duck from there!
JuneOne October 19, 2010 at 10:32 PM
Anonymousးyes,Dian Xiao Er